Ogaden News Agency (ONA) – Sargaal Kooxda TPLF Katirsanaa oo Latoogtay.
Sargaal Kooxda TPLF Katirsanaa oo Latoogtay.
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Addis Ababa ee xarunta wadanka Gumaysiga Itoobiya ayaa sheegaya in maalin nimadii shalay lakhaarajiyay sargaal sare oo katirsanaa ciidamada Gumaysiga kanamid ahaa saraakiishii kooxda TPLF.
Sida xogta aan kuhelayno waxaa maalinnimadii shalay jidka iskuxidha Baabili iyo Harar lagu dilay Kornayl Gu’ush oo kamid ahaa saraakiishii kooxda TPLF isla markaana ahaa sargaal katirsan ciidanka mulatariga Itoobiya.
Dablay aan haybtooda lagaranaynin ayaa lasheegayaa in ay jidka ugaleen Kornayl Gu’ush oo kasoo baxay magaalada Baabili kuna siijeeday magaalada Harar, halkaas oo sida lasheegay howlo aan lasheegin uu kawaday baryihii lasoo dhaafay.
Kornayl Gu’usha ayaa lasheegayaa in uu kamid ahaa saraakiishii tacadiyada badan kagaystay wadanka Ogadenia, waxaana lasheegay in uu ahaa saraakiisha lagu aaminay gumaadka shacabka Soomaalida Ogadenia iyo waliba amarsiinta maamul kusheegyadii wadanka soomaray ee gumaysiga u adeegi jiray.
Kornayl Gu’ush ayaa loobadinayaa in ay dishay kooxda talada wadanka lawareegtay ee OPDO kuwaas oo sida lasheegay ulo booco ugu tukubayay kornaylka iyo saraakiil kale oo kamid ah xubnihii sida dhaw ula shaqeeyay muumulkii wayaanaha ee talada laga faro maroojiyay.
Ma’aha markii ugu horaysay ee lakhaarajiyo sargaal sare oo lasoo shaqeeyay maamulkii hore ee Tigreega, waxaana saraakiishan si joogta ah ubeegsanaya kooxda OPDO oo iyadu hab kacdoon shacab ah talada wadanka kula wareegtay kadib 27 sano oo TPLF ay wadanka xoog kumaamulaysay.